အကောင်းဆုံးဘုရင်မကြီးရဲ့ GAMBIT တုံ့ပြန်မှုနှင့်အသစ်သောပြပွဲအကြောင်းကို MEMES - သတင်း
ငါစစ်တုရင်အကြောင်းကိုဘာမျှမသိပေမယ့်ငါသညျဤဘုရင်မရဲ့ Gambit memes 34 နှင့်ဆက်စပ်သိတယ်
Netflix ကပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကတိတ်တဆိတ်ဘုရင်မကြီးရဲ့ Gambit ကျဆင်းသွားကြောင့်အလွယ်တကူယခုနှစ်အကောင်းဆုံးပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ Anya Taylor-Joy၊ အသက် ၆၀ ရှိဗီရိုများနှင့်သောမတ်စ်ဘရက်ဒီ - ဆန့်စတာ၏ပြန်လာခြင်း ဘယ်သူကစစ်တုရင်နှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်အေးဆေးသူများကိုပြသနိုင်မည်ကိုဘယ်သူထင်လိမ့်မည်နည်း။
တွစ်တာမှာရှိတဲ့လူတိုင်းက The Queen ရဲ့ Gambit၊ အဓိကအားဖြင့် Benny, Beth, Harry နဲ့ Jolene ကိုချစ်ခြင်းရဲ့တုန့်ပြန်မှုတွေကိုတွစ်တာမှာပြသနေပါတယ်။ တကယ်တော့သူမရုံသူမ၏ကိုယ်ပိုင်လှည့်ဖျား - ချွတ်ပြရနိုင်မလဲ?
အဘယ်သူမျှမစစ်တုရင်ကစားရန်မည်သို့သဲလွန်စရှိသည်မဟုတ်သေးပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်အတူတူဂိမ်းကစား Benny နှင့်ဗက်စောင့်ကြည့်တော်တော်လေးမထိုက်မတန်ရဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုများအတွက်ကျေးဇူးတင်တွေအများကြီးလည်းရှိပါတယ်။
ဤရွေ့ကားအကောင်းဆုံးဘုရင်မကြီးရဲ့ Gambit တုံ့ပြန်မှု 34 ဖြစ်ကြပြီးငါသူတို့အဘို့ဤအရပ်၌ရှိပါတယ်:
beth harmon သူမ၏စစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲထွက်ခွာ pic.twitter.com/pfxYPnW8lm
- ً (@biglttlefleabag) အောက်တိုဘာ 25, 2020
မိဖုရားရဲ့ gambit ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ Beth harmon နဲ့ Benny Watts ၅ ယောက်ကကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာငှားနေရတယ် pic.twitter.com/N0n7mjjI6s
- Benny Watts (@mocriarty) အောက်တိုဘာ 25, 2020
ဘုရင်မကြီးရဲ့ Gambit (2020) pic.twitter.com/IiFzJaS66e
- femme fatale (@eliesaaab) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်
ငါ 2020 Netflix တွင်ကြည့်ရှုအရာအားလုံး၌ထဖေါ်ပြခြင်းနှေးကွေးဟယ်ရီ Melling ဖို့အသုံးပြုတဲ့ပါဝင်သည်မျှော်လင့်မပေးခဲ့ပါဘူး pic.twitter.com/1gbbgxWVjY
- မဲလစ်ဆာသည်ရွေးကောက်ပွဲကြောင့်ဖြစ်သောဟယ်လိုဝိန်းအမည်မရှိပါ (@melissaanelli) အောက်တိုဘာလ 30, 2020
The Queen's Gambit, CHESS အကြောင်းရုပ်ရှင်ဟာဘယ်လောက်အင်အားပြင်းထန်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြိုးစားရှင်းပြခဲ့တယ် @netflix ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောစီးရီးများနှင့်၎င်းကိုစောင့်ကြည့်နေသည့်လေးနာရီခန့်အသက်မရှူနိုင်ပုံ pic.twitter.com/GbzPxl4lN8
- Dannielle | 🥀 (@rosariumheart) အောက်တိုဘာလ 29, 2020
6. Wow သူကြီးပြင်းလာတယ်
ငါဘုရင်မရဲ့ Gambit စောင့်ကြည့်တာနဲ့ဒီနည်းကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌အနည်းငယ်သောသူငယ်ကစားသူတူညီတဲ့သရုပ်ဆောင်သည်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ပျက်နေပြီ
- Sammy (@sammywellerr) အောက်တိုဘာ 25, 2020
ငါ၏အခြောက်ဆယ် - မေတ္တာရှင်ခွေး netflix အပေါ်မိဖုရား gambit စောင့်ကြည့်နေကြသည်မျှော်လင့်ပါတယ် pic.twitter.com/lgMjv7a8Lw
- Aurora (@mybeardedgeorge) အောက်တိုဘာလ 27, 2020
၈။ Emily Paris မှာဘယ်သူလဲ။
Queens Gambit ဟာ v ကောင်းပြီး Netflix ကကျွန်တော့်ကိုတစ်ကြိမ်လောက်အကြံမပြုခဲ့ပဲ၊ ပဲရစ်မှာအမ်မလီကို ၈၇ ကြိမ်လောက်ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်
- Ciara 'အတိတ်၏ဝိညာဉ်၏အတိတ်' Dunne (@Ciarabelles) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်
၉။ ငါ့မိဖုရားကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်း မှလွဲ၍
မိဖုရား Gambit တွင် ၀ မ်းသာဝမ်းမြောက်ခြင်းကတွစ်တာစာစောင်ဖြစ်သည် pic.twitter.com/eNvpgTg3lJ
- gabriella (@worstdemo) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်
anya-taylor-ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်မြန်ဆန်သောစစ်တုရင်ကစားနေစဉ် Thomas thomas brodie-sangster အကြားလိင်ဆိုင်ရာတင်းမာမှု ,,,, စကားလုံးများ
- မာဒီသည် nadia ကိုချစ်သည် (@nadsparkes) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်
11. Jolene ကိုကျေးဇူးတင်လေးမြတ်တဲ့လူ့ဘောင်ကိုစတင်မယ်
moses ingram ဟာဘုရင်မရဲ့ကစားပွဲမှာဂျိုလင်ဟာအရမ်းကောင်းတယ်၊ သူမမြင်ကွင်းတိုင်းကိုခိုးယူခဲ့တယ် pic.twitter.com/3Na2J3eSe6
- မေ (@filmadlct) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်
Queen's Gambit ကိုနံနက် ၄ နာရီတွင်ပြီးဆုံးပြီးကျွန်ုပ်နောက်ထပ်လိုအပ်သည်
- ကျောက်စိမ်း (@ jadehayes0) အောက်တိုဘာလ 29, 2020
သူမသည်သင်ဤကြည့်ပေးသည် ... သင်ဘာလုပ်သနည်း pic.twitter.com/IcoxA5EIdG
- Netflix (@netflix) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်
ငါဘုရင်မရဲ့ GAMBIT အတွက်နှစ် ဦး စလုံးဖက်ရှင်ပစ္စည်းများချင်ပါတယ်!
တစ် ဦး ကချည်
- CulturePlay INSIIIIIIIIIIIDE (@picture_play) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်
၁၅။ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါဒီမှာရောက်နေတယ်
Queen's Gambit တွင်စစ်တုရင်ကစားနေသည့်လူများကိုကြည့်ခြင်း။ pic.twitter.com/TbUwpBsdxE
- ً (@kafkafesque) အောက်တိုဘာလ 29, 2020
မိဖုရားရဲ့ Gambit မှဒီအမျိုးသမီး Vibes သိတယ် pic.twitter.com/Crwsm2JVOU
- ခွေး McConnell (@abbancowy) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်
၁၇ ။ ငါဘယ်သူလဲ ဘယ်တော့မှမ
ဘုရင်မကြီးရဲ့ Gambit ဒုတိယသွားလာရင်းအပေါ်ပိုကောင်းသည်။ ဟုတ်တယ်၊
- Spooky Boo (@Sweeney_Boo) အောက်တိုဘာလ 29, 2020
မိဖုရားရဲ့ gambit အတွက်စစ်တုရင်ကောင်းဘွိုင်ကစားသော Thomas Brodie-sangster အကြောင်းကိုမလုံလောကျ pic.twitter.com/8MnFAybDBF
- iana murray (@ianamurray) အောက်တိုဘာလ 23, 2020
19. ဒါဟာခေါင်းစဉ်င် !!
သငျသညျ The Queen's Gambit ကိုကြည့်နေပြီးသူကဒါကဘုရင်မရဲ့ Gambit လို့ပြောတဲ့အခါ pic.twitter.com/BwzYuyJql9
- ကြောက်စရာ Gothmother ☠️ (@ jenny2x4) အောက်တိုဘာလ 29, 2020
မိဖုရားရဲ့ gambit ကောင်းသောခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကသူတို့အားအနည်းငယ်ဖြစ်စဉ်များထက်ပိုပြီး၌ငါ့နှမ Jolene ဖူးင့်သင့်ပါတယ်
- ကောင်းကင် (@heaven_amos) အောက်တိုဘာလ 27, 2020
ဘုရင်မကြီးရဲ့ Gambit: pic.twitter.com/2jjdvZaM0H
- ခေတ်မှီသောပြProbleနာများ (@TrendyProblems) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်
The Queen's Gambit ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်နောက်ဂိမ်းတစ်ခုမှာငါ့ကိုပါ pic.twitter.com/hDtx2hyNxR
- Netflix Canada (@Netflix_CA) အောက်တိုဘာလ 29, 2020
ကောင်းစွာကောင်းစွာကောင်းစွာ။ '' ဘုရင်မရဲ့ Gambit '' ပြီးနောက်ငါဟယ်ရီ Melling ပန်ကာကလပ်စတင်ရန်လုံးဝအဆင်သင့်ပါပဲ။ pic.twitter.com/DJkUaywHlB
- Alessandra K. Rangel (@alessandra_kr) အောက်တိုဘာ 22, 2020
ငါ့ရဲ့ဆံပင်ကိုဗက်ဟားမွန်နဲ့တူအောင်ဖြတ်ဖို့စဉ်းစားနေတာဟာတကယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးပါ။ စိတ်ကူးနိုင်ပါပြီ။ pic.twitter.com/kRVpXtW9yL
- 𝐩𝐮𝐭𝐫𝐢 (@karputttt) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်
၂၅။ ကျွန်ုပ်သည်စစ်တုရင်နှင့်အသက် ၆၀ ရှိသောအဝတ်အစားများသာဖြစ်သည်
ဘုရင်မကြီးရဲ့ Gambit ပြီးပြီ နောက်လာမည့်လအတွက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စရိုက်လက္ခဏာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည် pic.twitter.com/rJ22fmmZsp
- Natasha║BLM (@cailleachsplaid) အောက်တိုဘာလ 27, 2020
Netflix ဟာ Queen's Gambit ကိုဘယ်နေရာကမှမစွန့်ခွာနိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အထက်တန်းလွှာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ pic.twitter.com/Sf73LpZoUu
- // (@JakaAdy) အောက်တိုဘာလ 29, 2020
ငါ့ကို: ငါကြံစည်မှုအဘို့အမိဖုရားရဲ့ gambit စောင့်ကြည့်
- ကိတ် (@filmhardy) အောက်တိုဘာလ 29, 2020
Queen's Gambit သည်ပဲရစ်မြို့ရှိအမ်မလီပြီးနောက်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောဖက်ရှင် palette သန့်စင်သူဖြစ်သည်။ pic.twitter.com/huD5beAnO8
ကြီးမားသော chungus အမှန်တကယ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်
- hautelemode (@hautelemess) အောက်တိုဘာလ 29, 2020
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်သောအခါမှဘယ်တော့မှဘယ်သောအခါမှဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး၊ စစ်တုရင်ကစားသော Thomas Brodie-sangster သည်အလွန်ပူပြင်းနိုင်သည် pic.twitter.com/yJGrCNKC2w
- alex | ပန်ကာ (@swiftlynatalia) အောက်တိုဘာလ 24, 2020
သောမတ်စ်ဘရူဒီ SANGSTER AND ANYA TAYLOR ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစွာကြည့်ရှု pic.twitter.com/aenA6eXo2P
- newtmas maartje (@THEMAZEKILLS) အောက်တိုဘာ 25, 2020
၃၁။ အချို့သော Nanny McPhee သည်အကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသည်
သူကသောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ကျော်လာရန် beth ပြောသောအခါ Benny သူမငြင်းသည် pic.twitter.com/TTpklWosL4
- ava saw tmr table read (@newtsrapp) အောက်တိုဘာ 25, 2020
netflix နှင့်ပတ်သက်သောမိဖုရား၏ကစားနည်းကကျွန်ုပ်အားလုံးလုံးမျိုချခဲ့သည်။ ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်သည်
- မရှိ (@miskeencore) အောက်တိုဘာလ 29, 2020
ဘုရင်မရဲ့ Gambit ၏အခြားရာသီရှိပါနိုင်သလား ?? Jolene ဟာရှေ့နေတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်းအောင်မြင်မှုရချင်တယ် #QueensGambit
- ifeoma (@ ifaaayy40) ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်
ဘုရင်မကြီးရဲ့ Gambit! * စားဖိုမှူးရဲ့အနမ်း *
- Zamandlovu Ndlovu (@Ms_ZamaNdlovu) အောက်တိုဘာလ 29, 2020
ဘုရင်မကြီးရဲ့ Gambit ၏ပထမဆုံးရာသီကိုယခု Netflix တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးပေါ် Netflix ၏သတင်းများ၊ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုများနှင့်မှတ်တမ်းများအတွက် Facebook ပေါ်မှာ Netflix ၏သန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်းလိုပဲ။
• သင် Netflix ၏ဘုရင်မကြီးရဲ့ Gambit ၏သွန်းအသိအမှတ်ပြုရန်နေရာအရပ်ဖြစ်၏
• အိုကေဒါဗက်ဘုရင်မရဲ့ Gambit အတွက်ယူသောသူတို့အားအစိမ်းရောင်ဆေးပြားဘာတွေလဲ?
• Netflix ရဲ့နောက်ထပ်စစ်မှန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုစီးရီးတစ် ဦး socialite ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မဖြေရှင်းနိုင်လူသတ်မှုအကြောင်းပါ
သင့်၏မိသားစု WhatsApp အဖွဲ့နှင့်သင်တွေ့ဆုံဖူးသည့်စကားပြောဆိုမှုတိုင်း
X Factor သည်ရှုပ်ထွေးမှုအရှိဆုံးသော TV show ဖြစ်ပြီးဤအချိန် ၁၇ ခုကသက်သေပြသည်
နယူးယော့ခ် Mahopac မှာကြီးပြင်းမယ်ဆိုရင်သင်ဂရုစိုက်ရမယ့်အရာတွေ
RuPaul ကပြသရန်လိုလားသည့် judges ည့်သည်တရားသူကြီးများအကြောင်း RPDR UK တရားသူကြီးများအားကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည်
နယူးကာဆယ်လ်ရှိ uni တွင်ရှိသောမိန်းကလေးတိုင်းပိုင်ဆိုင်မည့်ဂန္ထဝင်ဖက်ရှင်အတတ်ပညာအားလုံးဖြစ်သည်